အဘိဓာန်ထဲမှာတောင်မရှိတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ အားနာတတ်တဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခု
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားမှုဆိုတာ ဘာလို့အရေးကြီးတာလဲ???
ကိုယ့်အိမ်ရှင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့လူတွေထဲမှာ သင်ပါနေပြီလား???
တစ်ပတ်ကို အရက် ၅ ပက်ခန့်သောက်သုံးခြင်းက အသက်တိုစေနိုင်ဟု လေ့လာချက်တစ်ခုကဆို In:Kawi Eats
လူကြားထဲမှာ လူလိုသိဖို့ In:Kawi Inspires, Life Hacks
အခုလိုနွေရာသီမှာ အားကစားလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေသိထားပါ (with 100 Plus) In:Kawi Inspires, Life Hacks
သီချင်းတွေကြားက ခံစားမှုတစ်ပိုင်းတစ်စ In:Kawi Inspires, Movies | Books | Apps
ထမင်းစားချိန်ဆိုရင် ဖုန်းဆက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အမေ In:Kawi Eats
ဆွေးစရာကောင်းတဲ့ မေလမှာ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ဖီးလ်ကြမယ် In:Kawi Inspires, Movies | Books | Apps
မြန်မာတို့ရဲ့ ရင်ထဲကသရက် In:Kawi Eats
Japanese Chicken Curry & Teriyaki Chicken Recipe In:Kawi Eats, Videos
ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းဖို့ Michelle Obama ကဘာတွေပြောခဲ့လဲ? In:Kawi Inspires, Life Hacks, Movies | Books | Apps
သင်တစ်ခါမှမကြားဖူးတဲ့ သရက်သီးစားပုံစားနည်းများ In:Kawi Eats
အခုဆိုရင် ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီကို ရောက်ရှိလာပြီိဆိုပေမယ့် စိတ်မညစ်ကြပါနဲ့။ ဒီရာသီကို နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ ရာသီအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အားလုံးကြိုက်ကြတဲ့ သရက်သီးရာသီပါ။ သရက်သီးတွေပေါလာပြီဆိုတော့ Mango Recipe တွေကို ဆိုင်တွေမှာတွေ့လာရတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့်အခု ဆိုင်တွေမှာ မရလောက်တဲ့ သရက်သီးစားနည်း ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Grilled Mango Jalapeno (သရက်သီးမှည့်ကင်) သရက်သီးကင်!!! သရက်သီးအစိမ်းကိိုတောင်မဟုတ်ဘူး… သရက်သီးမှည့်ကိုမှ ကင်ထားတာပါ။ ဒီလောက်အရည်ရွှမ်းတဲ့အသီးကို ဘယ်လိုတောင် ကင်လိုက်တာပါလိမ့်! 🤔 လုံးဝစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်။ ဒီသရက်သီးမှည့်ကင်ကို ရိုးရိုးကင်ပြီး ပျားရည်စမ်းစားကြသလို ရေခဲမုန့်၊ BBQ၊ ကြက်သား၊ အသုပ်စတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ပြီးတီထွင်စားသုံးကြပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်း အခွံခွာပြီး သရက်သီးကိုကင်လိုက်တာက သူတို့ကို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ချိုမြိန်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နဂိုချိုနေတဲ့အသီးက ပိုပြီးတောင်ချိုသွားတယ်ဆိုတော့… 😍😍😍 …………………………………………………………………………………………………. ၂။ Ripe Mango Curry (သရက်သီးမှည့်ဆီပြန်ဟင်း) သရက်သီးမှည့်ကို ဟင်းချက်စားဖူးပြီလား? အမှည့်မပြောနဲ့ အစိမ်းကိုတောင် မချက်စားဖူးတာ အမှန်ပါ။ အဲလိုဆိုရင်တော့ ဒီသရက်သီးမှည့်ဟင်းလေးကို စမ်းကြည့်သင့်တယ်နော်။ သူက အိန္ဒိယဟင်းပွဲတစ်ခုပါ။ ချိုပြီး အရည်ရွှမ်းတဲ့ သရက်သီးမှည့်ကိုမှ အိန္ဒိယစတိုင် စပ်စပ်လေးချက်ထားတာဆိုတော့ အားပါး….. 🤤🤤🤩 သွားရည်တောင်ယိုကျလာသလိုပဲနော်။ ဒီဟင်းကိုစားဖူးတဲ့သူတိုင်းကတော့ စားပြီးရင်းစားချင်လို့ပဲ ပြောကြပါတယ်။ သရက်သီးမှည့်တွေနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်စားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးကို စမ်းကြည့်သင့်တယ်နော်။ ………………………………………………………………………………………………… ၃။ Mango Kiwi Salsa (သရက်ကီဝီစလ်စာ) ဒါကတော့ အသုပ်တစ်မျိုးပါပဲ။ ပုံမှန်ဆို သရက်သီးစိမ်းကိုသာသုံးပြီး သရက်သီးထောင်း၊ သရက်သီးသုပ်စတဲ့ ဟင်းပွဲတွေကိုပဲ လုပ်စားလေ့ရှိကြတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အခုပြောပြမယ့် သရက်ကီဝီစလ်စာလေးက သရက်သီးအမှည့်ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း (၆) မျိုးထဲနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ အလွယ်တကူ လုပ်စားလို့ရတဲ့ ဟင်းပွဲလေးတစ်ခုပါ။ 😯😯 များသောအားဖြင့် နွေရာသီဆို အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်စားလေ့ရှိကြပြီး အာလူးကြော် ဒါမှမဟုတ် ပေါင်မုန့်တွေနဲ့တွဲပြီး စားကြတာပေါ့။ ………………………………………………………………………………………………… ၄။ Spicy Mango Sauce (သရက်သီးမှည့် အချဉ်) အချဉ်ဆိိုတာကတော့ ဘာပဲစားစား မပါမဖြစ်ပါရတဲ့ အရာတစ်ခုပဲလေ။ ဒါမှလည်း စားရတာ ပိုပြီးခံတွင်းတွေ့တာလေ။ များသောအားဖြင့် ပုံမှန်စားနေကျအချဉ်တွေဆို ငရုတ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုသုံးပြီး ပြုလုပ်ထားပေမယ့် ဒီအချဉ်ကတော့ သရက်သီးမှည့်ကိုအသုံးပြုပြီး ဖန်တီးထားတာပါ။ ချိုပြီးအရည်ရွှမ်းတဲ့ သရက်သီးမှည့်ကိုမှ ငရုတ်သီးအစပ်နဲ့ ရောစပ်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် သာမန်နဲ့မတူတဲ့ အရသာထူးခြားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တာပေါ့။ ကြက်ကြော်လေးကိုသာ ဒီအချဉ်လေးထဲနှစ်ပြီး စားမယ် ဆိုရင်တော့ အားပါး… 🤤🤤🤤 …………………………………………………………………………………………………. ၅။ ကြက်အုန်းနို့သရက်ပေါင်း ကြက်သားဆို အမြဲတမ်း ကြော်စား၊ ချက်စား၊ ကင်စား၊ သုပ်စားနဲ့ စားရတာရိုးနေပြီဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ကြက်သားကို နောက်ထပ် ပုံစံအသစ်တစ်မျိုးနဲ့ စားလို့ရမယ့်နည်းလေးပါ။ သရက်သီးမှည့်ကိုမှ အုန်းနို့နဲ့ရောပြီး ကြက်သားနဲ့အတူ ပေါင်းထားတာဆိုတော့ လုံးဝ အဆီအနှစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ ဟင်းပွဲတစ်ခုပဲပေါ့။ တခြားမစဉ်းစားပဲ အုန်းနို့နဲ့ သရက်သီးရောပေါင်းထားတဲ့အနံ့နဲ့တင် ဘယ်လောက်တောင် စားကောင်းမယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်နော်။ 🥰🥰🥰 ဒီလိုဆို သရက်သီးမှည့်ကိုအသုံးပြုပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလုပ်စားလို့ရတဲ့ ဟင်းပွဲတွေသိပြီဆိုတော့ တစ်ရက်တစ်မျိုးမရိုးအောင် သရက်သီးရာသီမကုန်ခင် အပီချက်စားလိုက်တော့နော်!!! ...
အခုလိုနွေရာသီဆို အပူလွန်ကဲတာကြောင့် အပြင်သွားတဲ့အခါတွေမှာ အပူမရှပ်မိအောင် အထူးဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အားကစားပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့ သာမန်လူတွေထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အားကစားပြုလုပ်တဲ့အခါတွေမှာ အားကစားသမားတွေက သာမန်လူတွေထက်ပိုပြီး လှုပ်ရှားလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ချွေးထွက်ပိုများပြီး ရေဓာတ်ကုန်ဆုံးမှုနှုန်း ပိုများတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးအပူလွန်ကဲလှတဲ့နွေရာသီမှာ အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကို အပူဒဏ်ကနေ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ၁) ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေကို ပြန်ဖြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အားကစားသမားတွေက သာမန်လူတွေထက်ပိုပြီး လှုပ်ရှားနေရတဲ့အတွက် ချွေးထွက်များပြီး ရေဓာတ်ကုန်ဆုံးတာ ပိုမြန်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် အခုလိုနွေရာသီရဲ့ အပူရှိန်ဟာလည်း ရေဓာတ်ကုန်ဆုံးမှုကို ပိုပြီးဖြစ်စေတာကြောင့် နွေရာသီမှာ အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ ရေဓာတ်ကိုမကြာခဏ ပြန်လည်ဖြည့်ပေးဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွေရာသီမှာ အားကစားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အလွယ်တကူ သွားလေရာသယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ ရေဘူး ဒါမှမဟုတ် 100PLUS လိုမျိုး Isotonic Drink (ရေဓာတ်ဖြည့် အချိုရည်) ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ဆားရည်တွေကို မိမိတို့အပြင်သွားတိုင်း မမေ့မလျော့သယ်ဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………………. ၂) ရေများများချိုးပေးပါ။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ နွေရာသီမှာ ရာသီဥတုပူပြင်းတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အပူတွေလျော့သွားအောင် ရေများများချိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်နေ့ကို မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် ရေပုံမှန်ချိုးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားကစားပြုလုပ်ပြီး ချက်ချင်းရေချိုးတာမျိုး၊ နေပူထဲကပြန်လာပြီး ချက်ချင်းရေချိုးတာမျိုးကိုတော့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ချွေးတွေ အနည်းငယ်တိတ်သွားအောင် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက် စောင့်ပြီးမှရေချိုးတာမျိုးပြုလုပ်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………………. ၃) ပေါ့ပါးပြီး လွတ်လပ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုသာဝတ်ပါ။ အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ အခုလိုပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ ပေါ့ပါးပြီး လေဝင်လေထွက်ဖြစ်စေတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အားကစားပြုလုပ်နေတဲ့အခါမှာ အရမ်းကြပ်တဲ့အဝတ်အထည်တွေက ချွေးတွေကိုစုပ်ယူထားပြီး လေဝင်လေထွက်မရှိတာကြောင့် မွန်းကြပ်ပြီး လှောင်ပိတ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားကစားပြုလုပ်တဲ့အခါတွေမှာ လွတ်လပ်ပြီးပေါ့ပါးတဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုသာ ၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………………. ၄) နေပူထဲသွားတဲ့အခါ ထီး၊ ဦးထုပ် ဆောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့။ အပြင်မှာလုပ်ဆောင်ရတဲ့ ပြေးတာလိုမျိုး အားကစားတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါ သင်တို့ရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်ကို အပူအရမ်းမရောက်အောင် ဦးထုပ်ဆောင်းသွားတာမျိုး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အားကစားပြုလုပ်ပြီးလို့ အနားယူတဲ့အခါမှာလည်း အရိပ်ကောင်းကောင်းရပြီး အေးမြတဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီး အနားယူသင့်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ အပြင်ထွက်ပြီး အားကစားလုပ်တဲ့အခါတွေမှာ အပူရှပ်တဲ့ဒဏ်ကနေ အနည်းနဲ့အများတော့ ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ………………………………………………………………………………………………. ၅) အစားအသောက်ဆင်ခြင်ပါ။ အားကစားပြုလုပ်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကိုသာ စားသင့်ပြီး တခြားသရေစာတွေနဲ့ အရက်သေစာသောက်စားတာကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအစားအစာတွေက လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေတဲ့အတွက် အားကစားပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဒုက္ခရောက်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်တို့အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အစားအစာတွေကိုသာ အဓိကထားပြီးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………………. ၆) အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ သင်တို့ရဲ့ အနားယူချိန်တွေနဲ့ အိပ်စက်ချိန်တွေကို အထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ အားကစားသမားတွေက သာမန်လူတွေထက်ပိုပြီး လှုပ်ရှားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် energy ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ညဘက်တွေနဲ့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ မိမိတို့တစ်နေကုန် အားကစားပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ energy တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် ကောင်းကောင်းအိပ်စက်အနားယူပေးဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ နွေရာသီမှာအားကစားပြုလုပ်တဲ့အခါ သတိထားရမယ့်အရာတေချို့ကိုဖော်ပြပေးပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဖော်ပြပေးထားတဲ့ အချက်လေးတွေအတိုင်း မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ကြမယ်ဆိုရင် အရမ်းပူတဲ့နွေရာသီမှာ အပူရှပ်ပြီးဖျားနာတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ...
လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ဖုန်းကိုမကိုင်ရင် နှစ်ခါထက်ပိုပြီး မခေါ်ပါနဲ့။ ဖုန်းနှစ်ခါခေါ်လို့မှ မကိုင်ဘူးဆိုရင် သူတို့မှာ သင့်ဖုန်းကိုကိုင်ဖို့ထက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရှိနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်ဆီက ပိုက်ဆံချေးပြီးတဲ့အခါ သူတို့ပြန်တောင်းဖို့ သတိမရခင် ပြန်ပေးပါ။ ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့ အချိန်မတိုင်ခင်ပြန်ပေးပါ။ ဒါက ကျေးဇူးဆပ်နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ တချို့ဆိုရင် ပိုက်ဆံပြန်ဆပ်တဲ့အခါ နေ့လည်စာ၊ ထီး၊ ဘောပင် စတာလေးတွေတောင် လက်ဆောင်ယူသွားတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကိုမုန့်လိုက်ကျွေးတဲ့အခါ စျေးအကြီးဆုံးအစားအစာကို မမှာပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့ကို သင့်အတွက်မှာပေးဖို့ပြောပါ။ လူတစ်ယောက်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် “ဒါဆို လက်မထပ်ရသေးဘူးပေါ့”၊ “ဘာလို့ကလေး မယူသေးတာလဲ”၊ “ဘာလို့ အိမ်မဝယ်သေးတာလဲ” စတဲ့မေးခွန်းတွေ မမေးမိပါစေနဲ့။ ဒါတွေက သင်နဲ့လည်း ဘာမှမဆိုင်သလို အမေးခံရတဲ့ သူတို့ကိုလည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က စကားပြောနေတုန်း ဖြတ်မပြောပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်ကို စနောက်တဲ့အခါ ကြိုက်တဲ့ပုံမပေါ်ရင် ဆက်မစပါနဲ့ ရပ်လိုက်ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကိုကူညီပေးတဲ့အခါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ကိုယ်က လူတစ်ယောက်ကို စကားပြောနေတဲ့အချိန် သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက အဝေးကိုရောက်ရောက်သွားတာ၊ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်က သင့်ဘက်ကိုလှည့်မနေတာ စတာတွေတွေ့ရင် သူတို့စကားဆက်မပြောချင်တော့လို့ပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ပြောလက်စ စကားကိုမြန်မြန်ပြောပြီး အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါ။ လူတစ်ယောက်ကို ပိန်လာတယ်၊ ဝလာတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောပါနဲ့။ လှလာတယ်လို့ပဲ ပြောပါ။ သူတို့ပြောချင်ရင် ဝိတ်ကျလာတဲ့အကြောင်း သူတို့ဘာသာပြောလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကို ဖုန်းထဲကနေဓာတ်ပုံပြတဲ့အခါ ဘေးကပုံတွေကိုဆွဲပြီး မကြည့်မိပါစေနဲ့။ နောက်တစ်ပုံက ဘာပုံဖြစ်နေမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ အထက်လူကြီးကိုဆက်ဆံသလို လေးလေးစားစားဆက်ဆံပါ။ ဘယ်သူကမှ သင့်လက်အောက်က လူတစ်ယောက်ကို ရိုင်းရိုင်းဆက်ဆံနေတာကို အထင်မကြီးပါဘူး။ လေးလေးစားစားဆက်ဆံတတ်တာကိုပဲ အထင်ကြီးမှာပါ။ လူတစ်ယောက်က သင့်ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောနေတဲ့အချိန် ဖုန်းကိုကြည့်နေတာက ရိုင်းတာထက်ကို လွန်နေပါပြီ။ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါ သူတို့မပြောဘဲနဲ့ လစာအကြောင်းမမေးပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ ဝင်မပါပါနဲ့။ အဝါမျဉ်းပေါ်မှာ မရပ်ပါနဲ့လို့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ့တဲ့အခါ မလောပါနဲ့။ ခဏရပ်ပေးထားပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ရေးထားတဲ့စာကို ယူသုံးတဲ့အခါ credit ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ စာရေးသူကို ဖော်မပြချင်ရင်တောင် မူလရေးသူလို့ credit ပေးလို့ရပါတယ်။ သင့်ကိုလူတွေဆက်ဆံစေချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း သူများတွေကိုဆက်ဆံပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ ဟုတ်? Credit : မူရင်းရေးသူ ဒါလေးကို ကြိုက်ရင်ပြန် share လိုက်နော်။ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ...
ကျွန်တော်ကတော့ Sai ပါ။ ဒီလအတွက် သီချင်း playlist လေးကိုလုပ်ဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ ကဝိပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီ playlist လေးကို ကဏ္ဍသုံးပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ ဒီ playlist လေးက ကျွန်တော့်အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ Playlist လေးမှာ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်လိုမျိုး relationship တစ်ခုပြိုကွဲပျက်စီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လို deal လုပ်မလဲဆိုတာကနေ ကြေကွဲသွားတဲ့ နှလုံးသားကို ဘယ်လိုပြန်ကုသမလဲ? နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ချစ်တတ်လာဖို့အထိ playlist လေးက တဖြည်းဖြည်းဆွဲခေါ်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးက surprise သီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ဒီ playlist တစ်ခုလုံးရဲ့ theme ကိုပျက်စီးသွားလောက်အောင် ပါဝင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးက အဆုံးအစမရှိဘဲ ဘယ်လောက်ပဲပြေးပြေး စခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ပြန်ရောက်သွားတတ်တဲ့ သံသရာထဲမှာပဲ လည်နေတာဟုတ်? ဒါကိုပဲ ကျွန်တော်တို့က အချစ်လို့ခေါ်ကြတယ်လေ။ ဒီလအတွက် ကျွန်တော်ရွေးပေးထားတဲ့ playlist တွေကတော့….. 1. Consequences – Camila Cabello 2. All Too Well – Taylor Swift 3. Break – Katharine McPhee 4. Honest – Bazzi 5. Everytime – Britney Spears 6. WhataHeavenly Way to Die – Troye Sivan 7. Missing You – Betty Who 8. Time Lapse – TAEYEON 9. Drinkin About You – Jake Miller 10. Two Ghosts – Harry Styles 11. Space Cowboy – Kacey Musgraves 12. Empty Handed – Lea Michele 13. Unconditionally – Katy Perry 14. Just Another Song – Lucy Hale 15. TALK ME DOWN – Troye Sivan 16. Piece by Piece – Kelly Clarkson 17. The Good Side – Troye Sivan 18. Somebody Else – The 1975 19. Surrender – WALK THE MOON 20. Thank u, next – Ariana Grande 21. Me – The 1975 22. Love – Kylie Minogue 23. Love Myself – Hailee Steinfeld 24. Back to You – Selena Gomez ...
သရက်… သရက်… သရက်…. ကျွန်တော်တို့ သရက်အကြောင်းပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ အရင်အချိန်တွေကို နည်းနည်းပြန်သွားဖို့လိုပြီထင်တယ်နော်။ အခုခေတ်လူငယ်တွေ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ဖွားတွေမကြုံလိုက်ရတဲ့ သရက်ရဲ့ ရာဇဝင်နဲ့ ဖြူစင်သလောက် လွတ်လပ်ခဲ့တဲ့ သရက်ပင်အောက်က ကလေးတစ်အုပ်ရဲ့ နေ့ရက်တွေဆီကိုပေါ့။ အခုတော့ လူနေအိမ်တွေကလည်း ပြည့်ကျပ်လာ၊ လူဦးရေကလည်းသိပ်သည်းလာ၊ လူတွေက ဖုန်းတွေနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးလာတဲ့အခါ အဲ့လိုနေ့ရက်လေးတွေက ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပါပြီ။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ခြံကျယ်ကျယ်နဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ ကွပ်ပျစ်ဆောက်၊ ရေနွေးကြမ်းသောက်ပြီးနေတတ်ကြတဲ့ လူကြီးတွေက သရက်ပင်စိုက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သရက်ပင်က အရိပ်ရတယ်၊ အသီးကချိုတယ်၊ အရွက်တောင် ပြုတ်ပြီးတို့စားလို့ရတဲ့အပြင် နောက်ဆုံး ထင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ “အသီးမှာ သရက်၊ အရွက်မှာ လက်ဖက်” ဆိုပြီးတော့တောင် စကားပုံရှိတယ်လေ။ ဒီတော့ သရက်ပင်ဆိုတာ အရင်တုန်းက လမ်းတိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ မရှားတဲ့အပင်တစ်ပင်ပေါ့။ ပြီးတော့ လမ်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ ကလေးတစ်အုပ်တိုင်းရဲ့ ကစားကွင်းကြီး ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ယောကျ်ားလေးတွေ သားရေကွင်းပစ်တာနဲ့ ကျောက်ဒိုးပစ်တာက ဒီသရက်ပင်ကြီးအောက်မှာပဲဖြစ်သလို မိန်းကလေးတွေ ဇယ်ခုန်၊ ကြိုးခုန်တာကလည်း ဒီသရက်ပင်ကြီးအောက်မှာပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုပဲဆိုးခဲ့တာက အမေက သားသမီးတွေအိမ်မှာမနေဘဲ ဘယ်သွားကစားနေပြီလဲလို့ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေးနေစရာမလိုပါဘူး။ တုတ်တစ်ချောင်းကိုင်ပြီး သရက်ပင်အောက် လိုက်ရုံပါပဲ။ အပင်တက်နည်းဆိုတာလည်း သရက်ပင်ကြီးဆီကနေပဲ သင်ယုူရရှိခဲ့တာပါ။ အချိန်ကျလာရင် သရက်သီးတက်ခူး၊ အကုန်လုံးလှီး၊ ဇလုံထဲည့်ပြီးတော့ ငံပြာရည်တွေလောင်းထည့် အားလုံးဝိုင်းလုစားရတဲ့အရသာကလည်း ဘာနဲ့မှလဲလို့မရခဲ့ပါဘူး။ အမေခွံ့ကျွေးတဲ့ သရက်သီးမှည့်နဲ့ ထမင်းကလည်း စားလို့မြိန်ခဲ့ပါတယ်။ သရက်သီးကို ဝယ်စရာမလိုတဲ့နေရက်တွေပေါ့။ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာတော့ ဒီလိုနေ့ရက်တွေမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သရက်ကို အပင်ပေါ်တက်ခူးလို့မရတော့ပေမယ့် အကောင်းဆုံးသရက်သီးတွေကို စိတ်ကြိုက်စားလို့ရနေတာကတော့ foodie တွေအတွက် စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး စိန်တစ်လုံး၊ မြကျောက် စတဲ့သရက်တွေကို စိုက်ပျိုးမွေးမြူပြီး ကမ္ဘာကိုတောင် တင်ပို့နိုင်တဲ့အထိတိုးတက်လာတာကတော့ တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်လို့ပြောရမှာပါ။ ဒီလို အကောင်းဆုံး စိန်တစ်လုံးသရက်သီးတွေကို city mart လိုနေရာမျိုးမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သရက် ရာသီချိန်ဆိုရင် ဆိုင်တွေမှာ သရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စားစရာတွေကို စိတ်ကြိုက်စားလို့ရတာကတော့ သရက်သီးကြိုက်သူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးနေရက်တွေပေါ့နော်။ ဒီလိုနေ့ရက်လေးတွေကို မကြာခင် ရောက်ရှိလာတော့မှာရော သတိထားမိကြရဲ့လား??? ...
လွယ်လွယ်ကူကူချက်ပြီး ထမင်းချိုင့်ထဲထည့်သွားလို့ရမယ့် ဂျပန်စတိုင်ကြက်သားဟင်းနဲ့ တယ်ရီယာကီကြက်သားဟင်းချက်နည်း ဂျပန်စတိုင်ကြက်သားဟင်းရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကြက်သား မုန်လာဥနီ ကြက်သွန်နီအာလူး S&B Golden Curry ဟင်းအနှစ် ကြက်ရိုးပြုတ်ရည် ဆီ တယ်ရီယာကီကြက်သား ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကြက်သားပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ဂျင်းကြက်သွန်ုုုဖြူပဲငံပြာရည်သကြားညိုရှာလကာရည်ပျားရည် ပြောင်းဖူးမှုန့်ဆီ အပေါ်က ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို City Mart Supermarket တွေမှာတစ်ခါတည်းဝယ်လို့ရပါတယ်နော်! ...
ကျွန်တော်က ခေတ်လူငယ်တစ်ယောက်ပီပီ အပေါင်းအသင်းများပြီး အပြင်ထွက်နေရတာကြိုက်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။ ဟိုသူငယ်ချင်းကလာခေါ်ရင် ပါသွားလိုက်၊ ဒီသူငယ်ချင်းကလာခေါ်ရင် ပါသွားလိုက်နဲ့ အိမ်သိပ်ကပ်တဲ့ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်မပါပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အပြင်ဘယ်လိုပဲ လျှောက်သွားလျှောက်သွား ထမင်းစားချိန်တော့ အိမ်ရောက်အောင်ပြန်တတ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ တစ်ခါတလေ အပြင်မှာပဲစားဖြစ်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ ထမင်းစားချိန်ဆို အိမ်မှာအတတ်နိုင်ဆုံးပြန်စားတတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့… ကျွန်တော့်အမေက အိမ်မှာဘယ်တော့မှ ထမင်း၊ ဟင်းကိုလုံးဝအပြတ်မခံတတ်တဲ့ အမေမျိုးပါ။ ညသန်းခေါင်ဗိုက်ဆာရင်တောင် ကျန်တာမရှိရင်နေမယ် ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့တော့ အမြဲကျန်နေတတ်ပါတယ်။ အမေက ကျွန်တော် တစ်နေကုန်အပြင်လျှောက်သွားနေလို့လည်း ဘာမှမပြောတတ်၊ မဆူတတ်ပါဘူး။ ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးမဆူသလို အပြင်သွားခါနီး ပိတ်ပင်တားဆီးတာမျိုးလည်း မလုပ်တတ်ပါဘူး။ အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တောင် ဦးထုပ်ဆောင်းသွားဖို့ သတိပေးတတ်တဲ့ အမေမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် ထမင်းစားချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ အမေ ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်ပါပြီ။ “ဘယ်ရောက်နေတာလဲ? ထမင်းစားချိန်ရောက်နေပြီ မစားသေးဘူးလား? ပြန်မလာသေးဘူးလား?” စသဖြင့် ပြောပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်သိနေတာက အမေ ကျွန်တော့်ကို အပြင်ပဲသွားနေလို့ ဆူနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ “ကျွန်တော်မစားတော့ဘူး အမေ။ အပြင်မှာပဲစားလိုက်ပြီ” လို့ပြောလိုက်ရင်လည်း အမေက “အေးအေး၊ အဲဒါဆိုရင်လည်း ပြီးရော” ဆိုပြီး ဘာမှလည်းပြန်မပြောသလို ဆူလည်းမဆူတတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်အစတုန်းက နားမလည်ခဲ့တာက အမေထမင်းစားချိန်ဆိုရင် ဘာလို့ဖုန်းဆက်တတ်တာလဲဆိုတာပါ။ အမေဖုန်းဆက်တတ်တဲ့အကြောင်းကလည်း အပြင်ပဲသွားနေလို့ လှမ်းဆူတာလည်း မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ သူချက်ထားတာတွေ လာမစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထမင်းစားချိန်ကျ အမေဖုန်းဆက်လို့ အိမ်ပြန်စားမိတိုင်း ထမင်းသေချာထည့်ကျွေးတတ်တဲ့ အမေ့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်နားလည်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော်ထမင်းစားချိန်ထက်ကျော်ပြီး အပြင်ရောက်နေပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမေဖုန်းဆက်တာကိုလည်း မကိုင်လိုက်မိပါဘူး။ အမေဖုန်းဆက်ထားတာတွေ့လို့ ငါတော့ အဆူခံရပြီဆိုပြီး ဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ ကျွန်တော်နားလည်သွားပါတယ်။ အမေရဲ့ဆူတဲ့အသံထက်၊ ဖုန်းမကိုင် အိမ်ပြန်ထမင်းမစားတဲ့သားကို ဒေါသထွက်နေတဲ့အသံထက် ထမင်းမစားဘဲ လျှောက်ပဲသွားနေမှာစိုးလို့ စိတ်ပူနေတဲ့ဖုန်းထဲက အမေလေသံဟာ ကျွန်တော့်ကို နားလည်သွားစေတာပါ။ ဒါကြောင့် များသောအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော် ဘယ်အချိန်ဘယ်လိုပဲ အပြင်ထွက်ထွက် ထမင်းစားချိန်တော့ အိမ်ပြန်ပြီး အမေချက်တဲ့ဟင်းကိုစားလေ့ရှိပါတယ်။ စားပြီးရင်လည်း “စားလို့ကောင်းတယ်အမေရေ” လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြောလိုက်ရင် ကမ္ဘာမှာအလှပဆုံး အမေ့ရဲ့အပြုံးကိုတွေ့ရပါပြီ။ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်အပြင်ပြန်ထွက်ပါတော့တယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးပါ။ သင်တို့ရော ကိုယ့်အမေချက်တဲ့ ဟင်းကို ဘယ်နှစ်ခါလောက်များ ကောင်းတယ် အရမ်းကြိုက်တယ်လို့ ပြောဖူးပါသလဲ?? အမေချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေ၊ ထမင်းတွေကိုရော တစ်နေ့တစ်နေ့ စားဖြစ်ကြရဲ့လား? Ag Nyi ...
မေလအတွက် စာအုပ် list လေးကိုတော့ ဖီးလ်လို့ကောင်းမယ့်စာအုပ်လေးတွေနဲ့ ဟာသစာအုပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဖီးလ်တစ်လှည့် ရီီတစ်လှည့်နဲ့ ဖတ်ကြရမှာပေါ့နော်။ ပုံမှန်ဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့အတိုင်းရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်လည်းပါ၀င်တာမလို့ ဘာစာအုပ်လေးလဲဆိုတာအောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။ မင်းလူ – အလွမ်းသစ် ဘုန်းမိုးက သူငယ်ချင်းမတွေကို အညာသူတွေအသားရေမွဲခြောက်တာကိုစတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းမတွေက ငါတို့သူငယ်ချင်း တင်မေထွန်းဆို အရမ်းလှတာလို့ပြန်ပြောတာကို နာမည်လေးကြားရုံနဲ့ ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ ဘုန်းမိုး။ နောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းတွေ စာမေးပွဲဖြေပြီး ရွှေစက်တော်ဘုရားဖူးသွားကြတဲ့အခါ ကံကြမ္မာက တင်မေထွန်းနဲ့တွေ့ဖို့ ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အခါ ဘုန််းမိုးတစ်ယောက် အချစ်စိတ်တွေ အသက်ပြန်ဝင်လာပြီး အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကို ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ……………………………………………………………………………………… မင်းယုေ၀ – ညီအစ်မနှစ်ယောက် မူရင်းရေးသားသူကတော့ ကမ္ဘာကျော် စာပေနိုဗယ်ဆုရ ဘင်္ဂလီစာရေးဆရာကြီး တဂိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစ်မဖြစ်သူ ရှာမီလာက ယောကျ်ားအပေါ် အလွန်အနွံတာခံသူဖြစ်ပြီး၊ ညီမဖြစ်သူ အူရမီကတော့ ငယ်ရွယ်သူတို့ထုံးစံအတိုင်း သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး လှပကြော့ရှင်းသူပါ။ ဒါပေမယ့် ဖောက်ပြားတတ်တဲ့ လူ့သဘာဝအတိုင်း မချစ်ကြိုက်သင့်တဲ့သူကို ချစ်ကြိုက်မိသွားတဲ့ အူရမီ။ ချစ်မိသွားတဲ့သူကလည်း အစ်မဖြစ်သူရဲ့ လင်ယောကျ်ား ဖြစ်နေတဲ့အခါ??? ရှာမီလာရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့ အူရမီရဲ့ရူးမိုက်မှုတွေကို ဖတ်ရမှာဖြစ်ပြီး အထစ်အငေါ့မရှိအောင် ပြောင်မြောက်လှတဲ့ ဆရာမင်းယုဝေရဲ့ ဘာသာပြန်အရေးအသားတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………… မိုးမိုး(အင်းလျား) – မီးရောင်အောက်ကိုဝင်လျှင် မီးရောက်အောက်မှာပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရတဲ့ ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ?? အနုပညာရှင်တွေကိုမြင်တိုင်း သူတို့ရဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေက နားလည်ကြရဲ့လားလို့အမြဲတွေးနေတတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကို “မီးရောင်အောက်ကိုဝင်လျှင်” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ဖတ်ရမှာပါ။ အနုပညာရှင်တွေဆိုတာ ကင်မရာအောက်မှာ သရုပ်ဆောင်နေရုံနဲ့မပြီးဘဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေ၊ မလိုလားမှုတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတာကတော့ – ……………………………………………………………………………………… တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – မိုးညအိပ်မက်မြူ မိုးညအိပ်မက်မြူဟာ ဆရာ့ရဲ့ပုံမှန်ဝတ္ထုတွေနဲ့မတူပါဘူး။ ဗဟိဒ္ဓခေါ် ပြင်ပလောကကို အခြေခံထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ အဇ္စျတ္တာရမ္မဏခေါ် အတွင်းစိတ်ဘဝကို အာရုံပြုထားတဲ့ စိတ်ပညာအခြေပြုဝတ္ထုပါ။ ဇာတ်လမ်းအစမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာနက ဒေါက်တာမသက်ရီရဲ့ မိတ်ဆွေဦးမင်းခိုင်က အကူအညီအရေးတကြီးလိုကြောင်း စာရေးပို့လိုက်တဲ့အခါ ဦးမင်းခိုင်ရှိရာ ပေါင်းတည်မြို့က ခေတ်မီခံ့ညားတဲ့ နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ ထူးဆန်းတာက မသက်ရီနဲ့တူလှတဲ့ မိန်းမပျိုလေးပါတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့၊ ဓာတ်ပုံထဲက မမရီက တစ်နေ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ သိပြီးသားပါဆိုတဲ့ မောင်ညိုမှိုင်း။ အိမ်ကြီးရဲ့ ညှို့ခြင်းကိုခံထားရတဲ့ မသက်ရီနဲ့ အိမ်ကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ??? မောင်ညိုမှိုင်းကရော လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်စပ်နေလဲ??? ……………………………………………………………………………………… အရိုး – တစ်ခါတုန်းက လမ်းပေါ်မှာ အရမ်းခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် မင်းဝေကျော်၊ နိုင်မျိုးနွယ်နဲ့ လဲ့ရည်မိုးဆွေ။ လဲ့ရည်မိုးဆွေရဲ့အိမ်က ယောကျ်ားလေးသူငယ်ချင်းထားတာ နည်းနည်းလေးမှမကြိုက်၊ လဲ့ရည်ကလည်း ယောကျ်ားလေးသူငယ်ချင်းရှိတာ အိမ်ကိုအသိမပေးထား။ မင်းဝေကျော်က လဲ့ရည်ကလွဲပြီး ဘယ်သူ့မှ စိတ်မဝင်စားတဲ့သူ။ တစ်နေ့ လဲ့ရည်ကို အိမ်ကကားလာကြိုတာနောက်ကျနေတယ်ထင်ပြီး ပေါ်တီကိုအောက်မှာ စောင့်ပေးနေတုန်း ခါတိုင်းလို အဖြေတတွတ်တွတ်တောင်းနေတယ်။ မင်းဝေကျော်က သူ့ကိုကြိုက်ရင် ခေါင်းလေးပဲညိတ်ပြဖို့ပြောတာကို လဲ့ရည်က အုံးလွဲနေတယ်ပြောတာကြောင့်ဆံပင်ကိုဖယ်ပြီး နှိပ်ပေးမယ်လုပ်နေတုန်း လဲ့ရည်အဖေက ကားနဲ့ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီး လဲ့ရည်ကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ခေါ်သွားတယ်။ တကယ်တော့ လဲ့ရည်အဖေက မင်းဝေကျော် လဲ့ရည်ကို အတင်းနမ်းနေတယ်လို့ထင်သွားတာဖြစ်တယ်။ ကျောင်းလုံးဝတက်ခွင့်မရတော့သောလဲ့ရည်ကို မင်းဝေကျော်ဘယ်လိုပြန်ထုတ်ရမလဲ?? သူ့အဖေရဲ့ရန်တွေကိုရော ဘယ်လိုခံရမလဲဆိုတာကို လူငယ်ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရယ်မောစရာ ရေးထားတာပါ။ အပေါ်ကစာအုပ်လေးတွေအကုန်လုံးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဇာတ်လမ်းလေးတွေပဲမလို့ ဖတ်လို့ကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ခံစားချက်လေးတွေကို ပြန်လာပြောပြပေးပါနော်!!! ...
Michelle Obama ဟာ တစ်ချိန်က အမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Barack Obama ရဲ့ ဇနီးပါ။ “အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရှိတယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးက တကယ်မှန်တယ်ဆိုတာ Michelle Obama က သက်သေပါပဲ။ သူမ ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကလည်း အရောင်းရဆုံးစာအုပ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Michelle ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေထဲက ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းဖို့ quote လေးတွေကတော့… ၁) ရှုံးနိမ့်မှုတွေအတွက် “ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာ သင်တိုးတက်ဖို့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ရှုံးနိမ့်သွားမှာမကြောက်ပါနဲ့။ ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။” လို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် The Power of an Educated Girl ဆိုတဲ့ ဟောပြောပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………………….…………………… ၂) အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းအတွက် “အမြဲတမ်း အကောင်းမြင်တတ်အောင်ကြိုးစားပါ။ တကယ်လို့ သင့်အနားကလူတွေ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ကို ကျရှုံးစေနိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် ထိုသူတွေအားလုံးကို ဘေးဖယ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်လမ်းကိုယ်အောင်မြင်အောင်ဆက်လျှောက်ပါ။” လို့လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် The Power of an Educated Girl ဆိုတဲ့ ဟောပြောပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………………….…………………….. ၃) ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက် “သင့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အရာကိုမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိ မရှိကို အရင်စဉ်းစားပါ။ ဖြစ်သင့်တဲ့အရာပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါ။ မဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာတွေကို လက်မလှမ်းပါနဲ့။” လို့ Becoming ဆိုတဲ့ သူမရဲ့စာအုပ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………… ၄) အောင်မြင်မှုဆိုတာ… “အောင်မြင်မှုဆိုတာ သင်ရှာနိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံပမာဏနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ အများအတွက်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာပါ။” လို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် Democratic National Convention မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………….…………………………. ၅) Negative အတွေးတွေအတွက်… “တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို မကောင်းပြောလာတဲ့အခါ၊ ချောက်တွန်းလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သူတို့နဲ့ယှဉ်ပြီး ပြန်မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့အနိမ့်ကသွားမယ်လို့ရွေးခဲ့ရင်တောင် ကျွန်မတို့က အမြင့်ကသွားဖို့ရွေးရမယ် ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်နေလို့ပါ။” လို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် Democratic National Convention မှာ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………………….…………………… ၆) သူများတွေကို ကူညီတဲ့အခါ… “တစ်နေ့ သင့်ကြိုးစားမှုကြောင့် အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ သင်ဖြတ်လျှောက်ခဲ့တဲ့ တံခါးတွေကို မပိတ်ခဲ့ပါနဲ့ နောက်တစ်ယောက်အတွက် ဖွင့်ခဲ့ပေးပါ။ နောက်ပြီး သင့်ကို အောင်မြင်မှုဆီိရောက်အောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကို ပြန်လည်ဖေးမပါ။” လို့ သူမရဲ့ Becoming ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ …………………………………………………………………….……………………… ၇) ခံယူမှုတွေအတွက် “ကျွန်မတို့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းက လွယ်ကူအေးချမ်းမှာမဟုတ်သလို ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာတိုင်းကိုလည်း တစ်ခါတည်းနဲ့အပြတ် ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုကိုတော့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သတ္တိဆိုတာ ကူးစက်နိုင်သလို မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာကလည်း အောင်မြင်မှုနဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာ သမိုင်းတွေက သက်သေပါပဲ။” လို့ Becoming မှာရေးထားပါတယ်။ .…………………………………………………………………….…………………… ၈) ကိုယ့်ကိုကိုယ် လေးစားဖို့အတွက် “ကျွန်မတ်ို့ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိပ်ဆုံးမှာထားဖို့ကို မမေ့ပါနဲ့။” လို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် Let Girls Learn ဆိုတဲ့ ပွဲလေးမှာ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ …………………………………………………………………….…………………… ၉) ကိုယ့်ကိုကိုယ်စစ်မှန်အောင်နေဖို့အတွက် “တကယ်လို့ ကျွန်မတို့ ကိုယ့်ရဲ့အတွေး၊ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်ပြီး ကိုယ့်အိပ်မက်တွေနောက်ကိုသာ လိုက်မယ်ဆိုရင် နောင်ဖြစ်လာမယ့် မျှော်လင့်ချက်တွေက ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာ ကျွန်မသင်ယူခဲ့ဖူးပါတယ်။” လို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် Tuskegee University မှာ အဖွင့်စကားအနေနဲ့ စပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………………….……………………. ၁၀) အောင်မြင်မှုတွေအတွက်… “အောင်မြင်မှုဆိုတာ သူများတွေအမြင်က သင့်ဘဝမဟုတ်ပါဘူး။ ရလဒ်တစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ခံစားချက်ပါ။ နောက်ပြီး စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာ စိတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေပြီး အတုယူစရာကောင်းတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပါ။” လို့ Becoming မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………………….…………………….. ၁၁) အရာရာမှာ မျှတဖို့အတွက်… “သင်ကဘယ်လောက်ပဲ မြင့်မြတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ လူတိုင်းကိုမခွဲခြားဘဲ နှုတ်ဆက်ပါ၊ အကူအညီလိုတဲ့သူကို ကူညီပါ။” လို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် Eastern Kentucky University မှာ အဖွင့်စကားအနေနဲ့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………………….…………………….. ၁၂) မိန်းမသားတွေအတွက်… “မိန်းမသားအချင်းချင်း ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို အချင်းချင်းကူညီဖေးမပါ။ တစ်ယောက်အတွက်တစ်ယောက်ရပ်တည်ပါ။” လို့ သူမရဲ့ Becoming စာအုပ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါလေးတွေကတော့ ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းဖို့ လေ့လာမှတ်သားထားသင့်တဲ့ Michelle Obama ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ...
သုတေသီများ၏အဆိုအရ တစ်ပတ်ကို အရက် ၅ ပက်ခန့် သောက်သုံးခြင်းက အရွယ်မတိုင်မီ သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို အရက် ၁၀၀ ဂရမ် သောက်သုံးခြင်း (အရက် ၁၀၀ ဂရမ်ဟာ ဝိုင် ၅ ခွက် ဒါမှမဟုတ် ဘီယာ ၅ ပိုင့် နှင့် ညီမျှ) ဟာ သေဆုံးနိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေတယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့The Lancet medical journal ထဲမှာ ပါတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုက ဆိုထားပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉ နိုင်ငံက လူအယောက် ၆ သိန်းကို လေ့လာခဲ့တဲ့ အဆိုပါ သုသေတနပြုလုပ်ချက်အရ အရက်များများ သောက်သုံးလေ့ရှိတဲ့သူတွေဟာ လေဖြတ်ခြင်း (stroke)၊ နှလုံးအလုပ်လုပ်မှု ပျက်ယွင်းခြင်း (heart failure) နဲ့ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ သွေးကြောနံရံများဖောင်းခြင်း (fatal aneurysms) တို့ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ ပိုများကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို အရက် ၂၀၀ ဂရမ် ကနေ ၃၅၀ ဂရမ်ကြား သောက်သုံးခြင်း (ဝိုင် ၁၀ ခွက် ကနေ ၁၈ ခွက် ဒါမှမဟုတ် ဘီယာ ၁၀ ပိုင့် ကနေ ၁၈ ပိုင့် နှင့် ညီမျှ) ဟာ လူတစ်ယောက် ပျမ်းမျှသက်တမ်းရဲ့ ၁နှစ် ကနေ ၂ နှစ်အထိ လျော့ကျသွားစေနိုင်ဟု အဆိုပါ လေ့လာချက်က ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက တရားဝင် guidelines တွေက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အရက် သောက်သုံးနိုင်တဲ့ပမာဏထက် ပိုပြီး လျှော့သောက်သင့်ကြောင်း အဆိုပါ လေ့လာချက်က အဆိုပြုထားပါတယ်။ U.K နိုင်ငံက နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားတဲ့ guidelines အသစ်မှာတော့ တစ်ပတ်ကို ဝိုင် ၆ ခွက် ဒါမှမဟုတ် ဘီယာ ၆ ပိုင့်ထက် ပိုမသောက်သင့်ကြောင်း အဆိုပြုထားပါတယ်။ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ရဲ့ guidelines အရတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်နေ့ကို အရက် တစ်ပက်ခန့် သောက်သုံးနိုင်ပြီးတော့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ တစ်နေ့ကို အရက် ၂ ပက်ခန့် အထိ သောက်သုံးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Credits : https://www.cnbc.com/2018/04/13/five-alcoholic-drinks-a-week-could-mean-a-shorter-life-study-says.html?__source=facebook%7Cmain ...